Bhizinesi reSocial Networks | Martech Zone
Monday, May 11, 2009 Mugovera, January 21, 2017 Douglas Karr
David Silver, muzvinabhizimusi wemabhizimusi uyo anoshanda zvakanyanya pasocial network, akanyora Iyo Yemagariro Network Bhizinesi Chirongwa: 18 Maitiro Anozogadzira Hupfumi Huru. Ndanga ndichiverenga kuburikidza nebhuku ndichifarira - sezvo ini ndiri mubatanidzwa we Mudiki Indiana uye muridzi we pasocial network yeNavy Veterans.
Iwo ma network maviri ane akasiyana bhizinesi mamodheru uye zvinangwa. Pat Coyle muridzi uye anoshanda Mudiki Indiana uye ari kutsvaga kuwedzera tarenda remukati rekuvaka the ultimate network - kuunza pamwechete tarenda, kudzora iyo kupera kwehuropi, inotsigira hunyanzvi hwemuno uye varaidzo, uye nekupa nzvimbo yekugadzira uye mazano. Pane toni yekugona uye mukana wekuti urambe uchivaka kunze kweChidiki Indiana - saka ini handioni chirongwa chebhizinesi chiripo (kunyangwe ndiri kuenda kugovana bhuku iri naPat).
Navy Vets iri munzira yayo yekuva isiri-purofiti yakatemerwa chikwereti mubatanidzwa. Chinangwa cheNavy Vets ndechekuve chikuru uye chakanakisa pasocial network ye United States Navy Veterans. Chero mari yekuita mari yemambure inozopihwa kune veterans 'rubatsiro sekuvhoterwa nenhengo dzayo. Ndiri kutarisira kunyora cheki yekutanga munguva pfupi! Pasina kupokana kuti netiweki inochinja hupenyu… uye yozvipatsanura kubva kune mamwe mauto eneti anotarisa kuita mari kubva kumashure kweavo veterans vakapa zvakawanda kare.
Iyo Social Network Bhizinesi Chirongwa inoita yakatarisa zvakasiyana maonero ekuti masocial network anofanira kuita sei mari. Muchidimbu, simba renhamba mukati me network rinofanira kushandiswa se zvivabatsire network kutyaira bhizinesi kumakambani. Fungidzira bhangi, chitoro, gweta femu, nezvimwewo kutenga kuti ive iyo mukuru [isa indasitiri pano] yeSmall Indiana. Ndipo David Silver paanoona mukana wacho.
Ini handina kukwanisa kuisa marongero gumi nemasere pamwechete kuti ndinyorore pano… ndinofunga pane zvakawanda chaizvo chaizvo. David anosanganisira bhuku rakazara rekutsvaga nekutenga, kukura, kuita mari uye kunyange kutengesa yako pasocial network. Zvinosara kuti zvionekwe kana kuendeswa kuchikosheswa pamadhora mazana matanhatu kusvika paUS $ 18 600 kunhengo yega yega inotsigirwa naDavid… miriyoni Ning network uye mazana emamiriyoni evashandisi… ndiyo mari yakawanda yakagara kunze uko.
Kana iwe uri anoshanda nesimba muzvinabhizimusi uyo anogona kuzvipira iwe kushanda masikati nehusiku kuti ukure yako pasocial network - pane izvi zvinogona kunge riri iro bhuku rauri kutsvaga! Ndingadai ndaifarira kunge ndaona chaiwo-epasi mienzaniso yekuenda pamwe nechero zano mune bhuku. Kune chikamu chikuru, zvinoita kunge bhuku iri zvishoma zvekufungidzira pane kuronga bhizinesi.
Kana zviri zvekufungidzira kwaDavid, hazvo… ndinobvuma! Simba rekudyidzana pasocial network harimo mune maficha, chikuva, manhamba… zviri mukukosha kwenetiweki kureva traffic uye izwi rekushambadzira mumuromo kune zvigadzirwa zvemazuva ano.
Tags: david sirivhamagariro enhausocial network bhizinesi chirongwaiyo social network bhizinesi chirongwa
Nyorera Google Analytics Campaign Querystring Simba uchishandisa jQuery